Mitaky Ny Famotsorana Ny Mpikatroka Mpiaro Ny Zon’Olombelona Miisa Dimy Notànana Ao Kambodza Ny Fanentanana #FreeThe5KH · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Mey 2017 4:34 GMT
Vakio amin'ny teny Türkçe, Italiano, Español, English
Fantatra ho anisan'ny mpifaninana amin'ny famaranana amin'ny Loka malaza ho an'ny Mpiaro ny Zon'Olombelona Martin Ennals 2017 izy dimy .
Nanomboka tamin'ny 28 Aprily 2016, mpikatroka mpiaro ny zon'olombelona Kambojiana miisa dimy no nosamborina noho ny filazana fa nanome kolikoly ny vavolombelona tamin'ny raharaha iray mahakasika ny mpitarika ny mpanohitra ao amin'ny firenena .
Efa herintaona izao no any am-ponja i Ny Sokha, Yi Soksan, Nay Vanda, Lim Mony, sy Ny Chakrya miandry ny fitsarana azy ireo raha mbola eo am-pamitana ny fanadihadiana ny manampahefana . Tamin'ny volana Aprily teo, raha nandre ny raharaha ny mpitsara dia nanitatra ny fitazonana ho enim-bolana hafa indray.
Voampanga ho nanao kolikoly ilay voalaza fa vadikelin'ny mpitarika ny mpanohitra ara-politika ao amin'ny firenena mba handà ny fiarahan'izy roa ry zareo dimy ireo. Nandritra izany fotoana izany, nandrahona ireo lohan'ny mpikambana ao amin'ny mpanohitra ny governemanta tamin'ny fiampangana azy ireo tamin'ny raharahan-keloka bevava isankarazany.
Mpikambana ao amin'ny Fikambanan'ny Fampandrosoana sy ny Zon'Olombelona Kambodziana (ADHOC) izy dimy ireo, vondrona fantatra amin'ny fisoloana vava ny zon'olombelona ao Kambodza. Niaiky izy ireo fa nanome torohevitra an'ilay ramatoa sy nanolo ny vola laniny tamin'ny sakafo sy ny fitaterana kanefa nandà ny fiampangana azy ireo ho nanao kolikoly .
Nilaza ny vondron'ny fiarahamonim-pirenena ao Kambodza fa jadona sy resaka politika no antony hihazonana azy ireo. Nanomboka tamin'ny herintaona, nanao fangatahana tamin'ny governemanta ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona ao anatiny sy ivelan'i Kambodza mba hamotsorana azy dimy tamin'ny alalan'ny fanentanana #FreeThe5KH (AfahoIzy5KH).
Fantatra fa mpifaninana amin'ny famaranana amin'ny Loka malaza ho an'ny Mpiaro ny Zon'olombelona Martin Ennals taona 2017 izy dimy ireo. Kanefa nilaza ny fanendrena ho toy ny fitsabahana amin'ny dingana ara-pitsarana ao amin'ny firenena ny governemanta Kambojiana.
Ny mpifaninantsika amin'ny Famaranana #Ennals2017 dia https://t.co/l9yThiTwSi
Mohamed Zaree (Egypta)
FreeThe5KH (Kambodza) pic.twitter.com/DrxkX2X6pv
Efa nandritra ny telopolo taona mahery ny antoko eo amin'ny fitondràna ao Kambodza no teo amin'ny fitondrana. Nametraka lalàna henjana mifehy ny famoriam-bahoaka ara-politika tao an-drenivohitra izy ireo rehefa very toerana manan-danja maro tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 2013, sady nanao fandrahonana ny olon-tsotra izay mahatonga ny “fisaratsarahana” ao amin'ny media sosialy. Tsy maintsy hifidy ny lehiben'ny kaominina sy faritra miisa 1.646 ny mpifidy Kambojiana amin'ny volana ambony kanefa nametra ny isan'ny andro hanaovana ny fanentanana amin'ny fifidianana ny antokon'ny fitondrana. Maneho ny toe-draharaha ara-politika mafana ao Kambodza amin'izao fotoana izao ny raharahan'ny mpikatroka notànana miisa dimy.
Nandrisika ny vahoaka mba haneho ny fanohanany ho an'ny mpikatroka ny iray amin'ireo hetsiky ny fanentanana #FreeThe5KH. Ampirisihina ireo mpisera mba handefa ny sarin'ny tenany mitazona ny sarin'izy dimy. Ireto ambany ireto misy amin'ireo sary sasany nalefa tao amin'ny pejy Facebook #FreeThe5KH :
Sary: Pejy Facebook FreeThe5KH